14-ka Februari waa maalinta loogu yareeyo Valentine’s Day ama Maalinta Jaceylka aduunka. Hadaba waxaan eegayaa taariikhda iyo asalka maalintaan. Maalinta Valentine’s Day oo aduunka si aad ah looga xuso ayaa taariikhdeedu waxay tahay mid ku dhisan been iyo hal abuur aan sal ku lahayn sida loo dabaal deggo maalintaan. Wadamada reer galbeedka ayaa maalintaan lagu xusaa in dadka isjecel ay ubaxyo iyo shukulaato isweydaarsadaan. Waa maalin ay shirkaduhu si weyn uga faaidaan.
Booqashadii Madaxweynaha Somalia uu ku imaan lahaa Sweden oo la baajiyay
Inaga(MUSLIMIINA) iyo Gaalada Farqiga noo Dhaxeeyea waxaa waaye/weeye.
1-Waxaan is Jecelnahay Maalin iyo saacad walbaa. Lakin Iyaga waxay is jecelyihiin 1 maalin oo ubax isku gadaan.
2-Waalidkeen waxaan jecelnahay Maalin walbaa , maalinwalbana waa noo jaceylka waalidka. Lkn Iyaga hal maalineey ubax kusoo ag tuuraan kedibna ka tagaan.
3-Maalin Walbaa Runtaan Sheegnaa , Waana naga reebantahay Xaaraamta , LKN iyagu maaliney BEEN isku sheeganey ku ballameen.
sxb jimcaale waa ka dhacsan tahey saxafi wax og ma tihid singleka waa la furey maxaa u soo gelin weydey akhbaartaas